China Outdoor led acrylic signboard ndị na-emepụta na ndị na-ebubata ihe |Zhengcheng
Ihe ịrịba ama nke ụlọ ahịa nke Jinhu Convenience Store na-ejikwa ọdịdị ọdịdị nke eriri agba atọ, nke dị mfe ma mara mma.Ngwaahịa a niile na-eji mpempe akwụkwọ acrylic ebubatara na Japan, nke na-adịghị adị mfe nrụrụ ma daa.Nhazi nke mechiri emechi nke ọma, enweghị mmiri na uzuzu, anyị na-eji tube nwere patent, na-egbuke egbuke ma na-echekwa ike.
Aha ngwaahịa: Acrylic ìhè igbe akara
Ngwa: Ụlọ ahịa dị mma, ụlọ ahịa kọfị, ụlọ ahịa achicha, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ahịa ahịa ahịa ọgwụ, ụlọ ahịa na-ere ahịa
Nhazi nhazi nke ọma
Nkà na ụzụ nnọchi ọkụ tube dị mma nke igbe ọkụ na-echekwa ike nke Zhengcheng anaghị achọ ngwaọrụ ọ bụla ma ọ bụ ịkwasa igbe ahụ.Enwere ike dochie tube ọkụ n'ime nkeji ise, nke na-ebelata ihe isi ike nke nrụzi ma na-ebelata ụgwọ ọrụ nke ihe ịrịba ama ahụ.
Ụlọ ọrụ anyị nwere ụlọ ọrụ ọkachamara na mpaghara nke 4,200 square mita na igbe ọkụ anọ na-emepụta ahịrị mmepụta.Zhengcheng na-eje ozi ugbu a karịa ụdị 100 na Eshia ma na-emepụta ihe karịrị 30,000 nke igbe ọkụ na-azọpụta ike kwa afọ.
Anyị factory onwem na ọkachamara mmepụta ngwá, na nwere otutu mmepụta ebu.Mgbe ndị ahịa tinyechara iwu, anyị nwere ike imepụta ọtụtụ ihe.
Na mgbakwunye, ndị ọrụ ahụ nwere ahụmịhe bara ụba na nrụpụta nrụpụta dị elu.Ụlọ ọrụ anyị eguzobewo mmekọrịta enyi na enyi na-adịte aka na ọtụtụ ụdị, ma nwee aha ọma na ụlọ ọrụ na-eme ihe ịrịba ama.
N'otu oge ahụ, anyị nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke anyị, nke na-ebelata ọrụ nke onye etiti, ma na-ebelata ọnụ ahịa ịzụ ahịa gị.
Ọtụtụ ụlọ ahịa na-emeghe na nkuku, na igbe ọkụ ọdịnala adịghị agbanwe agbanwe ma ọ dịghị adabara maka nrụnye.Otú ọ dị, igbe ọkụ Zhengcheng nwere ike ịgbasa ma ọ bụrụ na ọ dị ya mma, na-enwe ọdịdị mara mma na ihe ịrịba ama na-adọta ndị ahịa.
Nke gara aga: Akara ụlọ ahịa dị n'èzí maka Chaoshifa
Osote: Ministop mma ụlọ ahịa akara akara igbe
Ihe nrịbama ụlọ ahịa, Igbe nrịbama nke ọnya ọkụ, Vacuum Forming Light Igbe nbanye, Akara ngosi, Ihe nrịbama ụlọ ahịa ọgwụ, Igbe nrịbama nke mpụga,